Iri sei Andalusian Podenco: hunhu, hanya uye nezvimwe. | Imbwa Nyika
Yakadii iyo Andalusian Podenco
Mufananidzo - Caninacostadelsol.es
Iyo Andalusian Hound rudzi rwembwa inotangira kuSpain, kunyanya kubva kuAndalusia. Dzinza reIjipita Hound, imhuka inoshanda, ine rudo uye yakatendeka, saka yakakwana kumarudzi ese emhuri, kunyangwe vaine vana vadiki kana vasina.
Uye zvakare, kune matatu matatu saizi: akakura, epakati uye madiki, saka kana iwe uchitsvaga furry yekushandisa nayo akati wandei ehupenyu hwako, verenga kuti uwane. iri sei Andalusian Podenco.
1 Hunhu hwepanyama hweAndalusian Hound
2 Hunhu hwayo chii?
Hunhu hwepanyama hweAndalusian Hound
Iyo Andalusian Hound ine muviri wakasimba uye wakaenzana. Iyo inodzivirirwa nejasi rebvudzi iro rinogona kunge riri silky (refu uye silky), yakatwasuka (yakanaka uye ipfupi) kana sardinian (yakareba uye yakaoma), chena, tan kana musanganiswa wezvose zviri zviviri. Musoro wakaita sekoni, uye maziso ayo madiki, akapenya mwenje muvara. Mboro inopinza.
Inogona kuganhurwa mumatanho matatu, ayo ari:
Kukura kukuru: nehurefu pakuoma pakati pe54 ne64cm kana iri murume, uye iri pakati pe45 ne53cm kana iri mukadzi. Inorema kutenderedza 27kg.
Saizi yepakati: nehurefu pakuoma pakati pe43 ne53cm kana iri murume, uye pakati pe42 ne52cm kana iri mukadzi. Inorema kutenderedza 16kg.
Saizi diki: nehurefu pakuoma pakati pe35 ne42cm kana iri murume, uye pakati pe32 ne41cm kana iri mukadzi. Inorema kutenderedza 8kg.
Iine hupenyu hunotarisirwa hwemakore gumi nemaviri.
Hunhu hwayo chii?
Iyo Andalusian Podenco, senge mamwe maPodencos, yakashandiswa uye ichiri kushandiswa nanhasi kuvhima, kunyanya tsuro nembira. Neichi chikonzero, imbwa iyo anogara akangwarira, asi kuti azive maitiro ekupa mubayiro kune avo vanomupa rudo nguva dzese. Saka imhuka nduru y zvine mwero uyo zvakare ane ndangariro yakanaka kwazvo.
Iyo inogona nyore kujairana nekugara mufurati, asi inoda kuzotorwa kwekufamba kwemazuva ese uye kutambwa nayo kuti ufare.
Iyo Andalusian hound imhuka iyo, nekuda kwehukuru hwayo, inogona kurarama sezvatakataura mumafurati, mafurati, ... muchidimbu, mudzimba diki diki. Asi zvakakosha kwazvo kuti, pamusoro pekudya kwekutanga, kubaiwa nhomba uye kudzidziswa, unoendeswa kunorovedza zuva nezuva nekuti une simba rakawanda. Muchokwadi, kana iwe uchida, iwe unogona kujoina canine yemitambo kirabhu, senge agility kana disc-imbwa, uko kunze kwekugara uri muchimiro, iwe uchadzidza kuva nedzimwe imbwa nevanhu, kuteerera kune anokuchengeta uye kutevera iye.
Zvikasadaro, hutano hwake hwakanaka kwazvo. Inogona kuve, senge imwe imbwa, iyo inotonhora nguva nenguva kana kunzwa yakashata pane imwe nguva, asi hapana chisingakwanise kudzivirirwa - zvishoma kusvika padanho rakakura- nehurongwa hwakanaka hwejekiseni, chikafu chemhando yepamusoro chisina zviyo, kurovedza muviri zuva nezuva uye rudo.
Iwe wafungei nezveAndalusian Podenco?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Yakadii iyo Andalusian Podenco
Ini ndakagamuchira yepakati Andalusian hound uye isu takawira murudo kune mumwe nemumwe.
Dambudziko ratiri kushanda pariri ikozvino nderekuti dzimwe nguva panosvika murume wangu, anomupopotera.
Uye hongu, akangwara kwazvo.
Iyo Great Dane kunge chipfuwo
Kusvina mazino embwa